सिड्नी । अष्ट्रेलियाको पीआर लिएका विदेशीहरू सजिलै न्युजिल्याण्डमा गएर बस्न र काम गर्न सक्छन् । यसको लागि कुनै कानूनी व्यवधान छैन । तर, लामो समय न्युजिल्याण्डमा बस्दा भने ती मानिसहरुलाई केही समस्या पर्न सक्छ ।
अष्ट्रेलियामा कामदारमाथि ठगी, चर्चित पिज्जा कम्पनीमाथि मुद्दा दायर
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको एक चर्चित पिज्जा कम्पनीले पारिश्रमिक ठगी गरेपछि कामदारहरुले मुद्दा दायर गरेका छन् । करिब १० लाख डलर पारिश्रमिक ठगी गरेको भन्दै कामदारहरुले उक्त कम्पनीविरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
सार्वजनिक सेवा सुधारमा अष्ट्रेलियाको ठूलो फड्को
क्यानबेरा । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कदम चालेका छन् । क्यानबेरामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले यसले देशको सार्वजनिक क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्ने दावी गरे । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अहिले रहेका १४ विभागलाई बढाएर १८ वटा बनाइएको छ ।
अष्ट्रेलियामा थोरै कमाइले धेरै सम्पत्ति कसरी जोड्ने ?
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा नेपाली समुदाय बिस्तारै सेटल हुँदै जाने क्रमसँगै नेपालीहरुले गर्ने लगानीको धेरै भाग प्रोपर्टी मार्केटमा पनि छचल्किन थालेको छ । विगत केही वर्षहरुमा प्रोपर्टीको भाउ बढेपछि झन् यस्तो लगानी गर्ने क्रम तीव्र हुन थालेको हो ।
अष्ट्रेलियाको एनएसडब्लूमा रक्सी पिएर गाडी चलाउन पाइन्छ ?
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स (एनएसडब्लू) राज्यमा गत मे २० तारिकबाट सडक नियम सम्बन्धी नयाँ र कडा व्यवस्थाहरू लागु भएको छ । यस राज्यमा सवारीसाधन चलाउँदा कानूनी सीमा भन्दामाथि मादक पदार्थ सेवन गरिएको पाइएमा त्यस्ता चालकहरूको लाइसेन्स तत्काल तीन महिनाका लागि निलम्बन हुने प्रावधान रहेको छ ।
अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरु घरबेटीबाट शोषित
सिड्नी । उच्च शिक्षाको लागि अष्ट्रेलियामा अध्यायन गर्न आएका विद्यार्थीहरु घरबेटीबाट शोषित बनेको एक रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ । घर भाडाको बारेमा फितलो अनुगमन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु निरन्तर रुपमा ठगीमा परेको अध्यायनले देखाएको हो ।
अष्ट्रेलियाको सिड्नीबाट एक नेपाली विद्यार्थी बेपत्ता
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको सिड्नीबाट एक नेपाली विद्यार्थी बेपत्ता भएकी छिन् । सिड्नीमा बसोबास गर्दै आएकी नवीना महत गत शनिबारबाट परिवारको सम्पर्कमा नरहेकी हुन् । उनी आईतबार बिहान करिब पौने ५ बजेतिर सिड्नीको रेडफर्न स्टेशनमा रहेको बताइए पनि उनी परिवार, आफन्त तथा साथीहरुको सम्पर्कमा आएकी छैनन् ।
अष्ट्रेलियामा क्षमता अनुसारको काम पाउन छोडेपछि सरसफाइको काम गर्दै विद्यार्थी
सिड्नी । पछिल्लो केही समय यता अष्ट्रेलियामा आफ्नो क्षमता तथा दक्षता अनुसारको काम पाउन कठिन हुँदै गएको छ । एक अध्यायनका अनुसार टेम्पोररी ग्राजुएट (४८५ भिसा) पाउने नेपाली लगायतका अन्य देशका विद्यार्थीहरुले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम पाउन छोडेका हुन् ।